Europe ine vamwe chando nokunaka panguva inotonhora mwedzi kuti havana kufanana nzvimbo munyika. Pane zvakawanda zvakasiyana-siyana, uye hapana nzvimbo mbiri dzine chete kunzwa uye mhepo. Saizvozvo, Vanhu vazhinji vanoti kuti maguta maguta panguva chando mwedzi sokuti vachienda itsva rwendo. Winter ane tarenda anokwanisa kuchinja Europe chose, uye zvaita, kusika chiitiko zvachose itsva vaenzi kuti havagoni kuona chero dzimwe nguva yegore. The akawira chando kunounza yakawanda mabasa yechando uye mazororo zvakakosha kuti zvose mutambo chaizvo. Pasinei nokuwanda kuchinja uye runako, hazvibviri kushanyira zvose. Kana uchida kufamba kune mamwe dzakakurumbira mavara okufambisa, shanyira izvi 5 chando dzokugara mu Europe.
Kana uri kutsvaka inoshamisa munguva yechando zvichaita katyamadza iwe, zvino tarisa mberi pane muBudapest. Ndiro guta wakakwana kuti chando uchapukunyuka. Chimwe chikuru zvikonzero kuti vakawanda vanosarudza Budapest inotengeka prices. Unofanira kuwana kuona akanaka mutaundi pamwero inokwanisika. Budapest Kazhinji izere vashanyi munguva yezhizha. zvisinei, munguva yechando, unokwanisa kuona guta runako shoma vazhinji. Kunze kuti, you get a lot of chimney cakes and tasty wine.
Venice arege kuva wokutanga chinhu kuuya mupfungwa kana iwe kufungidzira dzechando European. zvisinei, kana iwe kuenda kuguta migero panguva yechando, ucharangarira zvachose. The yakatsvikinyidzana migwagwa uye cafes ruzha vari toned pasi, uye unoona kurutivi rweguta zhizha haagoni kuratidza. Zvose Chipatapata chiri mwedzi zhizha kutsiviwa wakadzikama uye kuti akakwana kuti chando remba akanyorova chadenga. zvisinei, zvinokosha kuona kuti guta anouya upenyu nokukurumidza apo Venice Carnival mabhanzi kumativi. ose February, guta awana sefungu Vashanyi, uye dzemaoresa Masiki kukangaidza mumigwagwa muguta. Creative zvokupfeka uye vachitamba mumigwagwa kuuya guta mavara munhoroondo youpenyu. Kana uchida munhu yainakidza yechando kuti haazombokanganwi, isa Venice pane zvaunonyora.
Europe ine chinhu vose. Zviri kwauri kusarudza chii chando wako inoshamisa nezviso zvakafanana uye kushandisa Save A Train kuti ikoko. Pane zvakawanda zvakaitika mumwedzi yechando, so get adventurous and take a bold step forward.
Unoda embed yedu Blog romukova “5 Winter Destinations In Europe” pana yako nzvimbo? kana Unogona kutora mapikicha edu uye rugwaro uye kutipa chikwereti ine kubatana iyi Blog romukova. Kana tinya pano: https://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/winter-destinations-europe/ – (Mupumburu pasi zvishoma kuona Embed Code)
europetravel trainjourney chitima mazano travelaustria travelfrance travelitaly travelswitzerland winterdestination winterdestinations wintertravel